Guddiga doorashooyinka Puntland xubin ka tirsan oo Iscasilay (Akhriso) – Radio Daljir
Nofeembar 15, 2018 1:12 g 0
Siciid Maxamuud Xirsi Diraac oo ka mid ahaa xubnaha muhiimka ah ee guddiga kumeel gaarka ah ee doorashooyinka Puntland ayaa maanta iska casilay xubinimadii guddigaasi.
Warqada iscasilaadiisa oo nuqul ka mid ah uu soo gaaray Daljir ayuu ku sheegay in duruufo isaga u gaar ah darteed uu uga tegay shaqadii uu u hayay guddiga doorashooyinka kumeel-gaarka ahe ee Puntland
” Anigoo ah Mr, Saciid Maxamuud Xirsi Diraac,, kana mid ahaa guddiga doorashooyinka Puntland ee TPEC waxaan taariikhda kor ku xusan iska casilay xubnimadi guddiga doorashooyinka Puntland duruufo iyo arrimo aniga uu gaar ah. waxaan u mahadcelinayaa guddigii iyo shaqaalihii aan soo wada shaqaynayay” ayuu yiri ku yiri Warqadiisa iscasilaad Mudane Sciiid.
Guddiga doorashooyinka Puntland oo la magacaabay 2 sanno ka hor ayaa ku guuldaraystay inuu shacabka Puntland ku qanciyo inay ururo furtaan ama uu Puntland ka hirgaliyo nidaamka axsaabta badan iyo doorasho Cod iyo Qof ah Puntland. Dhowr urur ayaa iska diiwaangaliyay mudadaas, kawaas oo qaarkood ayan buuxin shuruudihii laga doonayay.